Italy oo Puntland Amniga ka caawineysa
13 Dec 13, 2012 - 6:21:57 AM
Safiirka Talyaaniga u qaabilsan Somalia Andrea Mazzela ayaa sheegey in dowladiis
u walaac ka muujineyso dagaalyahanada kooxda Al-shabaab ee ku qulqulaya buuraleyda Galgala kadi
b markii laga qabsadey Kismaayo iyo deegaano kale koonfurta dalka.
Safiirka oo qoraal ka soo saarey warsaxaafadeed dhowaan Puntland ka dirtey Hawlgalo ciidankeedu ka sameeyey Galgala ayaa balanqaadey in dowladiisu sii wadi doonto taageerada ay siineyso Puntland gaar ahaan sugida amaanka iyo Xasiloonida.
‘’Puntland waxay muujisey go’aan adeeg waxayna u hurto naf sidii loola dagaalami lahaa Argagixisada gobolka’’ ayuu yiri Safiirku.
Ugu danbeyntii ayuu safiirka Talyaaniga Somalia u fadhiya waxa uu tacsi u direy madaxweynaha Puntland iyo qoysaskii ay askartu kaga geeriyootey dhowaan Qarax Miino baabuurkoodi haleeshey.
Talyaaniga ayaa ka mida dalalka Kaalinta hore kaga jira taageerida mashaariicda horumarineed Puntland ,waxana magaalada Garowe ka socda dhismaha Idaacada iyo Telefishin ay dowladu leedahay islamarkaasina Talyaanigu bixinayo dhaqaalaheeda.